Sidee ayaad ku ogaan haddii aad ku jeclahay?
ugu weyn ee » cilmi nafsiga » Psychology xiriirka » Sidee ayaad ku ogaan haddii aad ku jeclahay?
sidaas darteed, Waxaad la sugayay in aad, qof gaar ah, kaas oo aad ku abuuri kara xiriirka dhab ah. danbaynti, ahayd in isaga / iyada soo gala noloshaada. Но как вы поймете любовь это или просто увлечение?
Warqad Romantic dhalo